Nya Ahofama wɔ W’aware Mu | Abusua Nya Anigye
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Ɔbea no ka sɛ: “Eduu bere bi no, mihui sɛ me kunu, Michael, ntew n’anim mma me ne yɛn mma no koraa. * Bere a yenyaa Intanɛt pɛ na ne suban sesae, na minyaa adwene sɛ na ɔhwɛ nguamansɛm ho mfonini wɔ kɔmputa so. Anadwo bi bere a mmofra no kɔdae no, mibisaa no, na ogye toom sɛ ɔhwɛ nguamansɛm ho mfonini wɔ Intanɛt so. Ɛhaw me paa. Mannye anni sɛ me na saa asɛm yi ato me. Ahotoso a mewɔ wɔ ne mu no sae koraa. Nea ɛsɛee asɛm no koraa ne sɛ na obi a me ne no yɛ adwuma afi ase rekyerɛ me ho anigye.”
Ɔbarima no ka sɛ: “Bere bi a atwam no, me yere Maria huu mfonini bi wɔ yɛn kɔmputa so, na obisaa me ho asɛm. Bere a migye toom sɛ metaa hwɛ nguamansɛm ho mfonini wɔ Intanɛt so no, ne bo fuwii yiye. M’ani wui paa, na me tiboa buu me fɔ. Ɛyɛɛ me sɛ yɛn aware no agu ara ne sa.”
WUSUSUW sɛ dɛn na ɛbaa Michael ne Maria aware no so? Ebia w’adwene bɛyɛ wo sɛ nguamansɛm ho mfonini a na Michael hwɛ no ne ne haw titiriw. Nanso Michael behui sɛ saa subammɔne yi yɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ ɔhaw kɛse paa wɔ wɔn aware no mu—wonni ahofama ma wɔn ho. * Bere a Michael ne Maria waree foforo no, na wɔhwɛ kwan sɛ wɔbɛdodɔ wɔn ho na wɔabom ayɛ nneɛma a ɛbɛma wɔn ani agye. Nanso, sɛnea ɛtaa to awarefo pii no, bere rekɔ so no, ahofama a wɔwɔ ma wɔn ho wɔn ho no mu yɛɛ mmerɛw, na na ɛte sɛ nea wɔnnɔ wɔn ho bio.
Wususuw sɛ ɔdɔ a ɛwɔ wo ne wo hokafo ntam no ano adwo sen bere a mowaree foforo no? So wobɛpɛ sɛ mohyɛ ɔdɔ a mowɔ ma mo ho mo ho no mu den? Sɛ saa a, ɛsɛ sɛ wuhu nsɛmmisa abiɛsa yi ho mmuae: Dɛn na ahofama a wubenya wɔ w’aware mu no kyerɛ? Nsɛnnennen bɛn na ebetumi ama ahofama a ɛte saa no mu ayɛ mmerɛw? Dɛn na wubetumi ayɛ de ahyɛ ahofama a wowɔ ma wo hokafo no mu den?
Dɛn ne Ahofama?
Wobɛkyerɛ aware mu ahofama mu dɛn? Nnipa pii ka sɛ ɛyɛ asɛyɛde ara kwa. Sɛ nhwɛso no, ebia awarefo bi bɛkɔ so atra esiane wɔn mma nti anaa esiane sɛ wɔte nka sɛ ɛyɛ asɛyɛde a wɔwɔ wɔ Onyankopɔn a ɔhyehyɛɛ aware no anim nti. (Genesis 2:22-24) Nokwarem no, adwene a ɛte saa no teɛ na ɛbɛboa awarefo ma wɔatumi agyina aware mu nsɛnnennen ano. Nanso sɛ awarefo benya anigye a, ɛnsɛ sɛ wɔte nka sɛ ahofama a wobenya ama wɔn ho no yɛ asɛyɛde ara kwa.
Yehowa Nyankopɔn hyehyɛɛ aware sɛ ɛmma awarefo nnya anigye ne akomatɔyam ankasa. Ná ɔpɛ sɛ ɔbarima ne ‘ne yere ani gye,’ na na ɔpɛ sɛ ɔbea dɔ ne kunu na ɔte nka sɛ ne kunu dɔ no sɛ n’ankasa ne nipadua. (Mmebusɛm 5:18; Efesofo 5:28) Sɛ awarefo benya ɔdɔ a emu yɛ den saa a, ɛsɛ sɛ obiara nya ne yɔnko mu ahotoso. Saa ara nso na ɛsɛ sɛ wɔfa wɔn ho wɔn ho nnamfo wɔn nkwa nna nyinaa. Sɛ okunu ne ɔyere nya wɔn ho mu ahotoso na wɔfa wɔn ho nnamfo paa a, ahofama a wɔwɔ wɔ aware no mu no mu bɛyɛ den. Wobenya abusuabɔ a Bible ka ho asɛm sɛ emu yɛ den te sɛ nea nnipa baanu no yɛ “honam biako” no.—Mateo 19:5.
Enti yebetumi de ahofama atoto dɔte a wɔde to ntayaa ma ɔdan gyina ho. Wɔde nneɛma bi te sɛ anhwea, semɛnte, ne nsu na ɛfra yɛ saa dɔte no. Saa ara nso na ahofama gyina nneɛma bi te sɛ asɛyɛde, ahotoso, ne adamfofa so. Dɛn na ebetumi ama ahofama a ɛte saa mu ayɛ mmerɛw?
Nsɛnnennen Bɛn na Ɛwom?
Sɛ obi betumi ada ahofama adi wɔ aware mu a, egye adwumaden ne ne ho a ɔde bɛbɔ afɔre. Ɛhwehwɛ sɛ wode nneɛma bi bɔ afɔre na wasɔ wo hokafo ani. Nanso, sɛ́ obi befi ne pɛ mu ayɛ ade ama obi foforo a ɔrennya hwee mfi mu no yɛ ade a nnipa pii ani nnye ho nnɛ. Ebinom mpo susuw sɛ ɛmfata sɛ wɔde nneɛma bɛbɔ afɔre. Nanso bisa wo ho sɛ, ‘Nnipa a wɔyɛ pɛsɛmenkominya baahe na minim wɔn sɛ wɔwɔ anigye wɔ wɔn aware mu?’ Ebia obiara nni hɔ a ɔte saa. Dɛn ntia? Efisɛ sɛ ehia sɛ obi a ɔyɛ pɛsɛmenkominya de biribi bɔ afɔre ma n’aware kɔ yiye a, ɛnyɛ ade a ɔbɛyɛ, titiriw bere a onim sɛ ɔrenya mfaso biara wɔ so no. Ɛmfa ho sɛnea na awarefo dodɔ wɔn ho bere a wohuu wɔn ho foforo no, sɛ wɔannya ahofama amma wɔn ho a, aware no begyigya.
Bible ma yehu pefee sɛ aware gye adwumaden. Ɛka sɛ, “Ɔbarima warefo da dwene wiase nneɛma ho, sɛnea ɔbɛsɔ ne yere ani,” na “ɔbea warefo da dwene wiase nneɛma ho, sɛnea ɔbɛsɔ ne kunu ani.” (1 Korintofo 7:33, 34) Awerɛhosɛm ne sɛ, ɛnyɛ bere nyinaa na awarefo mpo a wɔtaa dwene wɔn yɔnko ho no hu ɔhaw a wɔn hokafo no wɔ anaa wohu nneɛma a wɔn hokafo no de bɔ afɔre. Sɛ awarefo ani ansɔ wɔn ho wɔn ho a, ɛda adi sɛ wɔn aware no bɛma wɔn ho ‘ahiahia wɔn ɔhonam mu’ asen sɛnea anka ɛbɛyɛ.—1 Korintofo 7:28.
Sɛ w’aware betumi agyina bere a morehyia nsɛnnennen na atumi akɔ yiye wɔ mmere pa mu a, ɛho hia sɛ wubu no sɛ ɛyɛ biribi a ɛtra hɔ daa. Wobɛyɛ dɛn anya su a ɛte saa, na wobɛyɛ dɛn ahyɛ wo hokafo nkuran ma wakɔ so ne wo atra?
Sɛnea Wobɛhyɛ Ahofama mu Den
Ade titiriw ne sɛ wubefi ahobrɛase mu de Onyankopɔn Asɛm, Bible no ayɛ adwuma. Sɛ woyɛ saa a, ɛbɛboa wo ne wo hokafo no. (Yesaia 48:17) Susuw nneɛma abien a mfaso wɔ so a wubetumi ayɛ ho.
Nya bere ma wo hokafo
1. Ma w’aware ho nhia wo paa.
Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ: ‘Mompɛɛpɛɛ mu nhu nneɛma a ehia koraa no.’ (Filipifo 1:10) Sɛnea okunu ne ɔyere ne wɔn ho di no ho hia paa wɔ Onyankopɔn ani so. Onyankopɔn bedi ɔbarima a odi ne yere ni no ni. Na ɔbea nso a obu ne kunu no ‘som bo Nyankopɔn anim.’—1 Petro 3:1-4, 7.
W’aware ho hia wo dɛn? Mpɛn pii no, sɛ biribi ho hia wo a na wugye bere pii wɔ ho. Bisa wo ho sɛ, ‘Ɔsram a etwaa mu no, bere dodow ahe na mehyɛɛ da yi sii hɔ maa me hokafo? Nneɛma pɔtee bɛn na mayɛ a ama me hokafo anya awerɛhyem sɛ yɛda so ara yɛ nnamfo pa?’ Sɛ woannya bere pii amma wo hokafo anaa woannya bere koraa amma no a, ebia ɛbɛyɛ den sɛ obegye adi sɛ aware no ho hia wo.
So wo hokafo susuw sɛ mo aware no ho hia wo? Wobɛyɛ dɛn ahu?
WOASƆ EYI AHWƐ PƐN? Kyerɛw nsɛm anum a edidi so yi wɔ krataa so: sika, adwuma, aware, anigyede, ne nnamfo. Afei hyehyɛ nsɛm no sɛnea wususuw sɛ ɛho hia wo hokafo no paa nnidiso nnidiso. Ma wo hokafo nso nyɛ saa ara mfa wo ho. Sɛ wuwie a, fa wo de no ma wo hokafo no na gye ne de. Sɛ wo hokafo te nka sɛ wunnya bere pii mma no na wonnyɛ nneɛma afoforo mmoa no a, wo ne no nsusuw nsakrae a ebia ebehia sɛ moyɛ na ahyɛ ahofama a mowɔ ma mo ho no mu den. Afei nso, bisa wo ho sɛ, ‘Dɛn na metumi ayɛ na ama m’ani agye nneɛma a ɛho hia me hokafo no ho?’
Nea ɛma obi fi ne hokafo akyi no fi ase wɔ komam
2. Kwati biribiara a ebetumi ama woafi wo hokafo akyi.
Yesu Kristo kae sɛ: “Obiara a ɔbɛkɔ so ahwɛ ɔbea anya akɔnnɔ ama no no asɛe aware dedaw ne koma mu.” (Mateo 5:28) Sɛ obi fi ne hokafo akyi a, ɔde ɔhaw kɛse ba aware no mu, na Bible ka sɛ wobetumi agyina so agyae aware. (Mateo 5:32) Nanso Yesu nsɛm a wɔafa mu asɛm aka wɔ ha yi ma yehu sɛ akɔnnɔ bɔne betumi atra obi komam bere tenten koraa ansa na onipa no asɛe aware ankasa. Akɔnnɔ bɔne a ɛte saa a obi bɛma n’ani agye ho no ankasa mpo kyerɛ sɛ wanni ne hokafo nokware.
Sɛ wobɛkɔ so anya ahofama wɔ w’aware mu a, si wo bo sɛ worenhwɛ nguamansɛm ho mfonini. Ɛmfa ho nea nnipa pii bɛka no, nguamansɛm ho mfonini a obi bɛhwɛ no bɛsɛe n’aware. Tie sɛnea ɔbea warefo bi ka sɛnea ɔte nka wɔ nguamansɛm ho mfonini a ne kunu hwɛ ho: “Me kunu ka sɛ nguamansɛm ho mfonini a ɔhwɛ no ma ɔdɔ a ɛwɔ yɛn ntam no mu yɛ den. Nanso ɛma mete nka sɛ me so nni mfaso na mintumi mma no nea ɔpɛ. Sɛ ɔhwɛ a, misu ara, na mafa mu ada.” So wobɛka sɛ ɔbarima yi rehyɛ ahofama a ɔwɔ ma ne yere no mu den anaasɛ ɔresɛe no? Wususuw sɛ ɔrema ayɛ mmerɛw ama ne yere sɛ ɔbɛkɔ so atra aware no ho? So ɔne no redi sɛ n’adamfo paa?
Ɔnokwafo Hiob ne ‘n’aniwa yɛɛ apam’ de daa ahofama a ɔwɔ ma n’aware ne ne Nyankopɔn adi. Osii ne bo sɛ ‘ɔremfa n’ani nkari ababaa.’ (Hiob 31:1) Dɛn na wubetumi ayɛ de asuasua Hiob?
Nea ɛka nguamansɛm ho mfonini a worenhwɛ ho no, ɛho hia sɛ wobɔ wo koma ho ban na woannya obi a ɔnyɛ wo hokafo ho anigye sɛnea ɛnsɛ. Nokwarem no, nnipa pii susuw sɛ sɛ ɔbea ne ɔbarima a wɔnyɛ awarefo de wɔn ho hyehyɛ wɔn ho a, ɛrentumi nsɛe wɔn aware. Nanso Onyankopɔn Asɛm bɔ kɔkɔ sɛ “Koma wɔ hɔ yi, ɛyɛ okontomponi sen ade nyinaa na emuɔ, hena na obenya mu ahuye?” (Yeremia 17:9) So wo koma adaadaa wo? Bisa wo ho sɛ: ‘Hena na ɔkasa a mitie—me hokafo anaa obi foforo a ɔnyɛ m’aware mu hokafo? Sɛ mete asɛmpa bi a, hena na midi kan ka kyerɛ no—m’aware mu hokafo anaa obi foforo? Sɛ me hokafo ka kyerɛ me sɛ menhwɛ sɛnea me ne obi a ɔnyɛ me hokafo bɔ yiye a, mɛyɛ m’ade dɛn? So me bo befuw, anaa mede anigye bɛyɛ nsakrae?’
WOASƆ EYI AHWƐ PƐN? Sɛ wuhu sɛ obi a ɔnyɛ wo hokafo kyerɛ wo ho anigye a, twa sɛnea wo ne no di nkitaho no so na wo ne no nyɛ nneɛma a ehia sɛ moyɛ nkutoo. Mfa w’adwene nsi nneɛma a wususuw sɛ saa onipa yi tumi yɛ no yiye sen wo hokafo no so. Mmom no, fa w’adwene si su pa ahorow a wo hokafo no wɔ so. (Mmebusɛm 31:29) Kae nea ɛmaa w’ani gyee wo hokafo no ho. Bisa wo ho sɛ, ‘So me hokafo nna saa su yi adi bio, anaasɛ me na minhu?’
Di Kan Hwehwɛ Mmoa
Michael ne Maria a yɛadi kan aka wɔn ho asɛm no yɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛhwehwɛ afotu a ɛbɛboa wɔn ma wɔasiesie wɔn haw no. Nokwarem no, afotu a obi bɛhwehwɛ no yɛ ade a edi kan ara kwa. Nanso esiane sɛ Michael ne Maria huu wɔn haw na wɔhwehwɛɛ mmoa nti, wɔdaa no adi pefee sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔ so tra, na wɔpɛ sɛ wɔyere wɔn ho ma wɔn aware no yɛ yiye.
Sɛ́ ebia w’ani gye wɔ w’aware mu anaa wowɔ ɔhaw no, ehia sɛ wo hokafo hu sɛ wopɛ sɛ mo aware no gyina. Yɛ nea wubetumi biara ma wo hokafo no nya awerɛhyem saa. So wowɔ ɔpɛ sɛ woyɛ saa?—w08 11/01-E.
^ nky. 5 Ɛwom sɛ nhwɛso yi fa ɔbarima a ɔhwɛɛ nguamansɛm ho mfonini ho de, nanso sɛ ɔbea nso yɛ saa a, ɛbɛkyerɛ sɛ onni ahofama wɔ aware no mu.
Nneɛma bɛn na metumi atew so na ama manya bere pii ama me hokafo?
Dɛn na metumi ayɛ ama me hokafo ahu sɛ mepɛ sɛ yɛn aware no gyina?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN October 2008
ƆWƐN-ABAN October 2008